Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo(Last Updated On: 17/04/2020)
Marka ay timaado in booqashada caasimadaha ugu caansan Yurub, London shaki la'aan waa ugu sareysa ee liiska dalxiis walba oo ay jiraan wax badan oo u sameeya london. Waxaa la helay muddo dheer ah, taariikh xiiso; durkiya qurux badan oo indhaha ku; oo waxaa jira waxyaabo badan oo ay halkaas ku samayn. Haddii aad tahay qof sahlan-socda dalxiiska oo doonaya in la barto ee degaanka dhaqanka, ama dalxiisto ah raadinayso farax, London waxay leedahay wax dukaanka kuu.
Waayo, kuwa idinka mid ah oo la raadiyo Waxyaabaha la sameeyo ee london la xidhiidha shopping, suuqyada kala duwan noqon doonaa muujiyo of booqashadaada. Ma waxaad raadineysaa dhab ah, cuntada deegaanka? Fiiri Suuqa Degmada iyo muunad ay farxaan gastronomic, ama cuno mid ka mid ah maqaayadaha ku dhow. Haddii aad ka badan in niyadda u tahay qaar ka mid ah shopping dukaan waaxda, Liberty waa meel fiican. Haddii kale, tag ugaarsadaan qaar ka mid ah waxyaabaha qadiimiga qabow ee Suuqa Portobello Road.
Helitaanka in London by tareenka ka Paris, Amsterdam, iyo Berlin
Waxaad ka gaari karin London Paris, Amsterdam, iyo Berlin si fudud via Eurostar, tareenada Intercity iyo Thalys. Qaar ka mid ah meelaha laga bilaabo yeelan doontaa hab more dabiiciga ah ee gaarey London ka badan kuwa kale. Tusaale ahaan, aad fuulaysid kartaa Eurostar-xawaaraha sare si toos ah tababaraan si ay u London ka Paris, oo waxaa jiri yar ka badan laba saacadood iyo badh.
Marka ay timaado in safraya London ka Amsterdam iyo Berlin, From Amsterdam, waxaad qaadan kartaa Eurostar ku toosi ama doorasho kale oo wanaagsan uu doonaynin in ay marka hore hesho si Brussels via Thalys ka dibna fuulaysid Eurostar ee Brussels London. The safarka qaadataa qiyaastii afar saacadood jidkaas oo waa jidka ugu dhakhsaha badan si ay u gaaraan London ka Amsterdam oo tareen.
Helitaanka caasimada UK ka Berlin tareen u baahan tahay laba iskujoog. Lugta kama dambaysta ah ee safarka waa isku mid sida laga soo Amsterdam, ka dibna loo hoydo Eurostar. Si kastaba ha ahaatee, option kale waa in ay tababarto safarka ka Berlin si Cologne, meesha aad doonaynin fuulaysid tareen si ay u Brussels. waa tareenka ugu dhaqsiyaha badan sodcaalkoodii ka bilaabeen Berlin London iyo qaadataa wax yar ka dibna ka yar 10 saacadood ka dibna aad samayn karto waxyaabaha aad baratay oo ku saabsan waxyaalaha ay sameeyaan in london oo dhan.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-things-to-do-london%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)